Horudhac: Chelsea vs Leicester City…(Aar-gudashada ay maanka ku heyso Blues, hardanka booska UCL & koox kale oo faa’ido u aragta natiijada ciyaartan) – Gool FM
(London) 18 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa caawa garoonkeeda kula ciyaareyso kooxda Leicester City kulanka 37-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Labadan naadi ayaa Sabtidii garoonka Wembley ku wada ciyaaray fiinaalkii FA Cup oo ay kooxda Leicester ku qaadday 1-0, waxaana caawa ay ku hardami doonaan horyaalka Ingiriiska oo hardankiisa boosaska afarta sare yahay mid xiiso gaar ah leh.
Maadaama Man United ay hubisay booskeeda labaad, sidoo kalena Man City ay ku guuleysatay horyaalka, kooxaha Chelsea, Leicester iyo Liverpool ayaa ku loolammaya labada boos ee kasoo hore afarta sare si ay xilli ciyaareedka dambe u ciyaaraan tartanka Champions League.
Kooxda Macallin Brendan Rodgers ayaa haatan fadhisa booska saddexaad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo leh 66 dhibcood, waxayna laba dhibcood ka sarreysaa Blues oo leh 64 dhibcood, hase ahaatee, waxaa labadaas naadi kaabiga kusoom haya Liverpool oo leh 63 dhibcood, waxaana haddii ay adkaato ciyaarteeda habeen dambe ay soo geli doontaa booska afaraad natiijo walba haka imaatee kulanka caawa.
Chelsea ayaanan laga helin war ku aaddan dhaawacyo cusub iyadoo Mateo Kovacic uu soo laabtay fiinaalkii FA Cup isagoo baddel kusoo galay ciyaartaas, hase ahaatee, waxa wali dhaawac ku maqnaan doona Andreas Christensen.
Leicester ayaanan dhankeeda caawa heli doonin difaaceeda Jonny Evans maadaama dhaawac kasoo gaaray ciribta looga saaray fiinaalkii Sabtidii lasoo ciyaaray, waxaana sidoo kale shaki la gelinayaa laacibka garabka ka ciyaara ee Cengiz Ünder kaasoo ciyaartii Chelsea ee horraantii toddobaadkan ku seegay dhaawac sinta ah.
Chelsea waa guuldarro la’aan lixdii ciyaarood ee ugu dambeysay Premier League oo ay wajahday Leicester City iyadoo barbarro gashay afar jeer, halka labada kalena la garaacay, waxaana xusid mudan in ciyaartii ugu dambeysay labadan koox oo Blues lagu garaacay 2-0 ciyaartii King Power Stadium ka dhacday ay ahayd Frank Lampard ciyaartiisii ugu dambeysay ee uu horyaalka maamulo Chelsea.
Leicester ayaa dooneysa inay caawa dhammeystirto inay labada kulan ee horyaalka ka adkaato kooxda Galbeedka London ka dhisan markii ugu horreysay tan iyo 2000-01.
Kooxda laga naaneyso The Foxes ayaa guuleysatay keliya labo kulan 29 ciyaarood oo ay hore u booqatay Chelsea iyagoo ciyaaraya horyaalka iyadoo 1-0 kaga adkaatay December 2018 halka ay 2-0 ku garaacday September 2000, si kastaba ha ahaatee, waxay diiwaanka ku qoratay 11 barbarro iyo 16 guuldarro kulammadaas.
Chelsea waa inay adkaataa labada kulan ee uga harsan horyaalka Premier League si ay u xaqiijiso inay fasal ciyaareedka dambe ka qayb gasho tartanka Champions League.
Blues ayaa feejignaan uga jirta isla markaasna ku dhow inay la kulanto saddex guuldarro oo xiriir ah dhammaan tartammada markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2006.
Chelsea ma aysan guuldarreysan ciyaarteeda ugu dambeysa garoonkeeda horyaalka 18-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay waxaana kulanka ugu dambeeya garoonkeeda ee horyaalka in la garaaco ugu dambeysay sanadkii 2002 waxaana xilligaas 1-3 ku garaacday Aston Villa, waxaana tan iyo markaas ay ku adkaatay garoonkeeda ciyaarta ugu dambeysa 12 guul halka ay lix barbarro gashay.
Dhanka kale, Chelsea ayaa guul gaartay kaliya labo ka mid ah toddobo kulan oo ay ciyaartay bartamaha toddobaadka xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, waxayna gool dhalin weysey afar ka mid ah shanta ciyaarood ee aysan guusha gaarin.
Guul ay caawa gaarto Leicester City ayaa xaqiijin doonta inay fasalka dambe ciyaari doonto tartanka Champions League isla markaasna ay ku dhammeysan doonto boosaska afarta sare.
Kooxda dhowaan hanatay FA Cup ayaa la kulantay keliya hal guuldarro 13-kii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka oo ay bannaanka kusoo ciyaartay waxayna guuleysatay toddobo ka mid ah, halka shanta kalena ay barbarro gashay.
Leicester ayaa kulammada bannaanka horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ka heshay 38 dhibcood, waxaana ka sarreeya kaliya labada koox ee ka dhisan magaadala Manchester.
Kelechi Iheanacho ayaa u baahan hal gool inuu dhaliyo caawa si uu u noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyay taariikhda Premier League ee hal xilli ciyaareed gudihiis dhaliyay gool toddobada maalmood ee uu ka kooban yahay asbuuca (Sabti, Axad, Isniin, Arbaco, Khamiis iyo Jimco ayuu gool dhaliyay fasalkan, waxaana ka dhimman Talaado.